N’Golo Kante oo ammaan ugu qubeeyay dhaliyaha cusub ee Arsenal Alexandre Lacazette – Gool FM
N’Golo Kante oo ammaan ugu qubeeyay dhaliyaha cusub ee Arsenal Alexandre Lacazette
Byare July 20, 2017
(China) 20 Luulyo 2017. Kubbad bur buriyaha Chelsea N’Golo Kante ayaa si aad ah u ammaanay saxiixa cusub ee Arsenal Alexandre Lacazette oo ku sheegay inuu yahay laacib fiican oo ku soo kordhay shaxda Gunners.
Arsenal ayaa lacago rikoodh ka noqday taariikhda kooxda 50 milyan oo bound kula soo wareegtay Lacazette horaantii bishan iyadoo ka soo afduubatay naadiga Lyon ee dalka Faransiiska.
“Waxaan ku garanayaa xulka qaranka iyo wixii uu ka sameeyay horyaalka Ligue 1 ee Faransiiska,” Kante ayaa sidaa u sheegay Evening Standard.
“Waa ciyaaryahan aad u fiican kaa oo dhaliyay in ka badan 20 gool kal ciyaareedk kasta xilli ciyaareedyadii yaraa ee ugu dambeeyay Ligue 1. Waa ciyaaryahan aad u fiican isla markaana ah mid fiican oo ku soo kordhay Arsenal.
“Waa gool dhaliye xariif ku ah kubbada, marka uu helana fursad wuxuu leeyhay hibo uu si fiican ugu dhammeystiro wuxuu noqon doonaa mid fiican oo ku soo kordhay shaxda Gunners.”.
Kante ayaa sanad raaxo leh ku soo qaatay Stamfrod Bridge kal ciyaareedkii tagay isagoo Premier League ka caawiyay Chelsea isla markaana ku guuleystay abaal marinta laacibka ugu fiican Ingiriiska ee PFA Player.
Ogow sababta uu Mourinho u doonayo in uu isku helo Lukaku iyo Perisic
Roma oo sugaysa ogolaanshaha kama danbaysta ah si ay u dhisato garoon cusub